इवार्ड ब्ल्याग फाउंडेशनबाट ब्लग: प्रेम, लिंग र इन्टरनेट
adminaccount888 31st मार्च 2020 नयाँ समाचार
क्यापिंग के हो? यसमा बाल संरक्षण विशेषज्ञ जोन कारले लेखेका महत्वपूर्ण ब्लगमा हामी क्यापरहरू र क्यापिंगका बारे सिक्छौं र यसले बच्चाहरूलाई कस्तो जोखिम दिन्छ। यो लकडाउनको समयमा सबै अधिक सान्दर्भिक छ। क्यापिंगसँग…
adminaccount888 XNUM X मार्च 27 नयाँ समाचार
ठूला अश्लीलहरू महामारीको क्यापिटलाइज गर्न खोज्छ पोर्न महामारीमा यो अतिथि पोष्ट नेशनल रिभ्यु इन्स्टिच्युटको राजनीतिक पत्रकारितामा विलियम एफ। बक्ले फेलो मैडेलिन कार्नेसको हो। मूल लेख यहाँ देख्न सकिन्छ। उनको …
नि: शुल्क आमाबाबुको इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको गाइड
adminaccount888 XNUM X मार्च 20 शिक्षा, स्वास्थ्य, नयाँ समाचार
अभिभावक र हेरचाहकर्ताहरू बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण रोल मोडेल र मार्गनिर्देशन हुन्। यौवनकालमा, बच्चाहरू यौनको बारेमा विशेष उत्सुक हुन्छन् र यसको बारे सकेसम्म धेरै जान्न चाहन्छन्। यो किनभने प्रकृतिको नम्बर एक प्राथमिकता छ ...
उमेर प्रमाणिकरण चाँडै?
adminaccount888 XNUM X मार्च 18 नयाँ समाचार
बेलायत सरकारले पोर्नको लागि चाँडै उमेर प्रमाणिकरण लागू गर्ने सम्भावना नजीक हुँदै गइरहेको छ। उमेर प्रमाणिकरण प्रणाली प्रदान गर्ने आशा राख्ने केही कम्पनीहरूले न्यायिक समीक्षा खोजिरहेका छन्। यसले सरकारलाई कार्य गर्न बाध्य गर्न सक्छ। …
WePROTECT ग्लोबल एलायन्स
adminaccount888 XNUM X मार्च 13 नयाँ समाचार
अभिभावकहरूले हामीलाई प्राय: उनीहरूका बच्चाहरूलाई अनलाइन हानीको जोखिम कम गर्न सरकारहरूले के गर्नुपर्दछ भनेर सोध्छन्। यो ब्लगले केहि सब भन्दा महत्वपूर्ण खेलाडीहरूको परिचय दिन्छ, WePROTECT ग्लोबल एलायन्स र "पाँच आँखा" समूह सहित। यो पाहुना ...
बच्चा दुरुपयोग हेर्दै
adminaccount888 25th फेब्रुअरी 2020 नयाँ समाचार
बाल दुर्व्यवहार इमेजरी हेर्ने लोकप्रियतामा असाधारण वृद्धिको चौंकाउने नयाँ प्रमाणहरू टाइम्स द्वारा प्रकाशित गरिएको थियो। वृद्धि को मापन को लागी मात्र विश्वसनीय व्याख्या कानूनी अनलाइन पोर्नोग्राफी को दर्शकहरु द्वारा वृद्धि को कारण हो। …
अश्लील स्वास्थ्य संकट
adminaccount888 10th फेब्रुअरी 2020 नयाँ समाचार
MADELEINE KEARNS राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थानमा एक विलियम एफ। बक्ले फेलो हुन्। उनी ग्लासगो, स्कटल्याण्डकी हुन् र उनी प्रशिक्षित गायक हुन्। अश्लील स्वास्थ्य संकटमा यो लेख २ February फेब्रुअरी २०२० को संस्करणमा देखा पर्‍यो ...
Sexting र कानून
adminaccount888 31st डिसेम्बर 2019 नयाँ समाचार
आमा बुबा आमा छ भनेर थाहा पाउँदा चकित हुन सक्छ जहाँ सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्ध फैलिएको छ, जबरजस्ती यौन सम्बन्ध पनि सामान्य छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि यो अश्‍लील सामग्री हेर्ने बाट प्रभावित छ किनकि यसले बदमाशी र छललाई प्रोत्साहन गर्दछ। गार्जियन लेख तल सेट गर्दछ ...
यौन गला दबा
adminaccount888 9th डिसेम्बर 2019 नयाँ समाचार
यौन दुखाइ बढ्दै छ। पुरस्कृत फाउन्डेशन विश्वास गर्दछ कि यो नि: शुल्क, स्ट्रिमिंग इन्टरनेट पोर्नोग्राफिको कारण उदीयमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको हिस्सा हो। परोपकारी संस्थाको अध्यक्ष मेरी शार्पसँग बीबीसीमा हाम्रो कामको बारेमा छलफल गर्ने ठूलो अवसर थियो ...
टेक coms विफलता
adminaccount888 24th नोभेम्बर 2019 नयाँ समाचार
यो जोन कारबाट एक पाहुना पोष्ट हो, जसले मुख्य अपूर्व बिचारकर्ताहरू इन्टरनेटबाट बाल दुर्व्यवहार इमेजरी हटाउने बारेमा चिन्तित छन्। न्यू योर्क टाइम्स द्वारा अनुसन्धान मा मूल ब्लग जोन को डिजाईडेट साइट मा देखा पर्‍यो। हामीले अन्य भर्खरको फिचर ...
1 पृष्ठ 13